ရုပ်ရှင်၏တစ်နှစ်: 2018 ရုပ်ရှင်စီစဉ်ထား premieres | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ရုပ်ရှင်ရုံသည်လူတို့အား၎င်း၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ပုံပြင်များနှင့်အတူပျော်မွေ့စေသည့်အပြင်အလွန်ကောင်းသောကမ္ဘာဖြစ်သည်။ သူလည်း enter ည့်ခံသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်၏စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။ ယခုနှစ်အစတစ်ခုချင်းစီတွင်ရုပ်ရှင်အသစ်များအတွက်ရည်မှန်းချက်အသစ်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များအသစ်ဖန်တီးထားသည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကောင်းစားသူများအတွက်လိုအပ်သည်။ သူတို့ရုံးခန်းသွားမယ့်ရက်ကိုသတိထားပါ အများဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်ရုပ်ရှင်သည်အများပြည်သူအတွက်ဖြစ်သည်။
1 ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားအဘယ်နည်း။
1.1 X-Men: အသစ် Mutants
1.2 Avengers: Infinity စစ်ပွဲ
1.3 Fantastic သားရဲ: Grindelwald ၏ပြစ်မှုများ
1.4 ဝင်္ကပြေးသမား: သေခြင်းတရားကုသခြင်း
1.5 မယုံနိုင်စရာ 2
အဆိုပါဘာတွေလဲ ရုပ်ရှင် Premieres အများဆုံး 2018 အတွက်မျှော်လင့်?
X-Men: အသစ် Mutants
၂၀ ရာစု Fox မှထုတ်လုပ်ပြီး Josh Boone မှထုတ်လုပ်သည်။ Aprilပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရဆုံးဇာတ်ကားများကိုထပ်မံထွက်ရှိလာလိမ့်မည်။ X-Men သည် Marvel ရုပ်ပြဇာတ်ကောင်များကိုအခြေခံသည်။
Wolfsbane - Maisie Williams ။
Magik - အန်ယာ Taylos ရွှင်လန်းမှု။
Cannonball - ချာလီ Heaton ။
Sunspot - ဟင်နရီဇန်ဂါ။
Mirage - Blu Hunt ။
ရသည်မှာ, သူ့နောက်ဆုံးပေါ်နောက်တွဲယာဉ်, ဒီအသစ် ရုပ်ရှင်သည်ကြည့်ရှုသူများအားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော ဦး တည်ချက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
27ပြီလ ၁၄ ရက် ယခုနှစ်အတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားများဖြစ်သော Avengers: Infinity War သည် Box Office တွင် ၀ င်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဤရုပ်ရှင်၌လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကမှချွတ်ယွင်းနေသောလက်သည်းများစွာကိုဖြေရှင်းခြင်းအပြင် Iron Man ၏သံချပ်ကာသစ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ တူတူဘဲ Thanos ၏လူကြမ်းဖြစ်လိမ့်မည်, သူ Saga ၏သူရဲကောင်းများအားလုံးရင်ဆိုင်ရရမယ်သူ.
Fantastic သားရဲ: Grindelwald ၏ပြစ်မှုများ
ဒီအံ့သြဖွယ်ရုပ်ရှင်ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာဖြန့်ချိမှာဖြစ်တယ် ဟယ်ရီပေါ်တာစာချုပ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်သော်လည်းသူ၏စကြဝuniverseာသည်ယခင်ကထက် ပို၍ ရှင်သန်နေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Fantastic တိရိစ္ဆာန်များအပြီးနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။ ပြသရန်များစွာရှိပုံကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤရုပ်ရှင်အသစ်သည် Redmayne၊ Dan Fofler, Katherine Waterston နှင့် Alison Sudol တို့ကိုလည်းအတူတူယူဆောင်လာသည်။ Johnny Deep ကို Grainelwald၊ အဓိကလူကြမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်မည်။
အောင်မြင်သော Saga ပိုင်နောက်ရုပ်ရှင်တစ်ကား ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်မှာပြမယ် အဓိကဇာတ်ကောင်များစွာအတွက်နှုတ်ဆက်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း Dylan O'Brien သည်သောမတ်စ်အဖြစ်ဆက်လက်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။
သူ၏ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရန် ၁၄ နှစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Incredibles 14 သည်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရုပ်ရှင် Premieres Brad Bird ကညွှန်ကြားထားသောဇွန်လ 15, 2018, အဘို့အမျှော်လင့်ထား။
ဤရုပ်ရှင်၌ Mr. Incredible၊ Elastigirl, Dash နှင့် Violeta တို့ကိုထပ်မံပြသခြင်းအပြင် ထပ်မံ၍ လည်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်မှာကျွမ်းကျင်မှုမရှိပုံရတဲ့ကလေး Jack-Jack အပါအ ၀ င်။
Image ရင်းမြစ်များ - Wikipedia / Howls
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » ဒီနှစ်အတွက်မျှော်လင့်ထားတဲ့ရုပ်ရှင် Premieres တွေ
ဒီဆောင်းရာသီသင့်ရဲ့စတိုင်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ Overlay ကိုအကြံပြုချက်များ